တရုတ် - မြန်မာနယ်စပ် တည်ငြိမ်မှုကို ကာကွယ်ပြီး နယ်စပ်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ရမည? - Yangon Media Group
တရုတ် – မြန်မာနယ်စပ် တည်ငြိမ်မှုကို ကာကွယ်ပြီး နယ်စပ်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ရမည?
တရုတ်- မြန်မာ နယ်စပ်တည်ငြိမ်မှုကိုကာကွယ်ပြီး နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမြှင့်တင်ရမည်ဟု တရုတ်နိုင်ငံ တော်ကောင်စီဝင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. Wang Yi က ပြောကြားခဲ့ ကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ၂ဝရက် Chi-nese Embassy in Myanmar ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်။ တရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီ ဝင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. Wang Yi သည် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက် မှ ၁၈ရက်အထိ ယူနန်ပြည်နယ် တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်သို့ လာရောက် စစ်ဆေးစဉ်တွင် တရုတ်-မြန်မာချစ် ကြည်ရေးကိုတိုးမြှင့်ပြီး တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်တည်ငြိမ်မှုကို ကာကွယ်ကာ နယ်စပ်ဒေသ စည်ပင်သာယာရေး နှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို မြှင့်တင်ရ မည်ဟု ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Mr. Wang Yi သည် တရုတ်- မြန်မာနယ်ခြားမြစ် နယ်ခြားမှတ်တိုင် နယ်စပ်အဆောက်အအုံများ၊ ရွှေလီနယ်စပ်ဂိတ်၊ တရုတ်-မြန်မာရေနံ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းလမ်းကြောင်းနှင့် ‘နှစ်ပြည်တစ်ရွာ’ နယ်စပ်ရပ်ကွက် များသို့ သွားရောက်လေ့လာစစ်ဆေး ကြည့်ရှုပြီး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကျင်းပ ကာ အခြေခံဌာနများနှင့် ရှေ့တန်းလုပ်သားများ၏ ထင်မြင်ချက်နှင့် အကြံပြုချက်များကိုလည်း လက်ခံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ Mr. Wang Yi က ”တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်သည် နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည် ရေးအတွက် အရေးကြီးသည့်ဆုံချက် ဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင် ပိုင်းဒေသ၏ လုံခြုံရေး၊ တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးနှင့် “Belt and Road” အတူတကွ တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
Chinese Embassy in Myanmar ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ Mr. Wang Yi က တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်လုပ်ငန်း၏ အရေးပါမှုကို အပြည့်အဝနားလည်သိရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပြည်တွင်းသက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးမှုများကို တစ်ဆင့်တိုးမြှင့်၍ နယ်စပ်စီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းကို အတူတကွ ကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နယ်ခြားမျဉ်းကြောင်း ပြတ်သားတည်ငြိမ်မှုကို ကာကွယ်သင့်ကြောင်း၊ နယ်စပ်စနစ်တကျဖြစ် မှုကိုကာကွယ်ခြင်းဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဒေသပြည်သူများ၏အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်လုံခြုံမှုကို အာမခံ ပေးကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်လည်း ဆက်လက်အားပေးကူညီသွားမည်ဖြစ်ပြီး တရုတ်-မြန်မာနယ် စပ်ဒေသ ရေရှည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို အကောင်အထည်ဖော်ကာ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ပြည်သူများ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် လူနေမှုဘဝအတွက် ငြိမ်းချမ်း၍ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပေးမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
ပျော်ရွှင်ဆင်နွှဲ မန်းသင်္ကြန် ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲကို ပညာရှင် လက်ရာပြိုင်ပွဲနှင့် လျှပ်တစ်ပြက် လ